Madaxweyne Deni o soo dhisi doonno xukumadda kooban oo 16 Wasiir leh – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxweyne Deni o soo dhisi doonno xukumadda kooban oo 16 Wasiir leh
Allhadaaftimo February 6, 2019 Uncategorized
Garoowe)-Habeen kahor madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Denni ayaa joojiyey qaabilaadda dadweynaha inta lagu dhawaaqayo golaha wasiirada taasi oo ka dhigan in la dhammaystiran xukuumadda cusub.
Ilo xogagaal ah ayaa warbaahinta qaar u xaqiijiyey in wasaaradaha cusub ay noqon doonaan wax ka yar 16 Wasaaraddood, sidaas oo kalena ay wadar ahaan noqon karto 35 xubnood, taas oo ka dhigan in la dhimay wasaaraddo badan.
Xogta ayaa tibaaxaysa in laysku daray qaar kamid ah wasaaradihii kala duwanaa ee dowladda iyo hayaddaha qaar si meesha looga saaro maamul xumadii iyo dhaqaalihii badnaa ee ay qaadan jireen xubnahaasi wasiirada ah.
Xukuumadii hore ayaa ka koobnayd ku dhawaad 70 Wasiiro, wasiiro kuxigeeno iyo Wasiiru dowlayaal ah, taas oo ahayd mid ay ku bixi jireen dhaqaale fara badan, waxaana isha aad loogu hayaa tiradda xukuumaddan cusub.
Previous Paul Anthony wuxuu ahaa Muslim tukada lana baxay magaca Ibraahim kahor intaan la dilin.
Next Dowlada Federaalka Soomaaliya iyo Shirkada Spectrum ayaa maanta oo Khamiis ah lagu wadaa inay magaalada London ee dalka UK kusoo bandhigaan qeybtii koowaad ee xogta Gaaska ku jira xeebaha Soomaaliya